नेता र अधिकारीहरूले आफ्ना नानीहरू प्राइमेरी स्कूलमा पढाउनुपर्छ- अनित थापा - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारनेता र अधिकारीहरूले आफ्ना नानीहरू प्राइमेरी स्कूलमा पढाउनुपर्छ- अनित थापा
‘हामी बुद्धि कम अनि मन बेसी प्रयोग गर्छौं र यही कारणले हामी पछाड़िएका हौं। हाम्रो ठूलो समस्या नै बेरोजगारी हो। हाम्रो दिमागमा नै बसेको छ बेकारी समस्या। यो अहिले रोग नै भएको छ। यसले पहाड़वासी ग्रसित छ, हामी व्यवहारिक छैनौं। यहाँको शिक्षा व्यवस्थामा क्रान्ति ल्याउन र उन्नति गर्न सबै नेताहरू र प्रशासनिक अधिकारीहरूका नानीहरू सरकारी स्कूलमा पढ़्नुपर्छ। तब मात्र सरकारी स्कूलको अवस्था याद हुन्छ।’
खरसाङ, 31 दिसम्बर
दार्जीलिङ पहाडको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र बौद्धिक विकासको लागि सङ्गोष्ठी सम्पन्न भयो। तीनधारेको 20 माइलस्थित स्मृति बनमा आइतबार सङ्गोष्ठी समन्वय समिति तीनधारे महानदी समष्टीको आयोजनामा सम्पन्न सङ्गोष्ठीमा खरसाङको विधायक डा. रोहित शर्माको अध्यक्षता र जीटीए बीओए उपाध्यक्ष अनित थापा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए।
तीनधारे महानदी समष्टीको9वटा खण्ड समितिबाट विद्यार्थीवर्ग र अभिभावकहरू लगायत साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रका मानिसहरू उपस्थित थिए। सङ्गोष्ठीमा वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था र कसरी शिक्षाको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तीनधारेको सुपुत्र तथा जेएनयुबाट पीएचडी गर्ने डा. विवस सेवाले वार्ता राखे।
त्यसरी नै शैक्षिक र बौद्धिक विषयमा खरसाङ कलेजको प्राचार्य डा. समीर बल अनि तीनधारे क्षेत्रमा ग्रामीण पर्यटन व्यवसायबाट कसरी आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ओसन लेप्चाले वार्ता राखेका थिए। कार्यक्रममा तीनधारे महानदी समष्टीको समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्वर्द्धना पनि गरियो ।
यसमा स्रष्टा असीत राई, डा. ईआर लामा, डा. दिपेन्द्र शर्मा, हरिप्रसाद छेत्री, युवराज सुन्दास, मिशनेरी अफ् च्यारिटीको 20 माइलस्थित सिस्टरहरू लगायत सभाध्यक्ष डा. रोहित शर्मा, प्रमुख अतिथि अनित थापा, तीनजना वार्ताकारहरू डा. समीर बल, डा. विवस सेवा, ओसन लेप्चालाई पनि आयोजक समितिको तर्फबाट सम्वर्द्धना गरियो।
ग्राम कल्याण समिति नयाँ कमानका नानीहरूले स्वागत नृत्य गरेपछि थालिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जीटीए उपाध्यक्ष अनित थापाले भने, ‘हामी बुद्धि कम अनि मन बेसी प्रयोग गर्छौं र यही कारणले हामी पछाड़िएका हौं। हाम्रो ठूलो समस्या नै बेरोजगारी हो। हाम्रो दिमागमा नै बसेको छ बेकारी समस्या। यो अहिले रोग नै भएको छ। यसले पहाड़वासी ग्रसित छ, हामी व्यवहारिक छैनौं।’
उनले अझ भने, ‘यहाँको शिक्षा व्यवस्थामा क्रान्ति ल्याउन र उन्नति गर्न सबै नेताहरू र प्रशासनिक अधिकारीहरूका नानीहरू सरकारी स्कूलमा पढ़्नुपर्छ। तब मात्र सरकारी स्कूलको अवस्था याद हुन्छ।’ उनले आफु नचाहँदा नचाहँदै पनि राजनीतिमा आएको बताउँदै राजनीतिमा आफ्नो 10 वर्षको अनुभव साझा गरे। उनले व्यवहारिक राजनीति गर्नुपर्ने बताए।
अब गोर्खाल्याण्ड भन्दै नेता परिवर्तन गर्न र अन्धाधुन्धा नकुद्ने सुझाव राख्दै टुङ्गोमा कसले र कसरी लान्छ त्यो बुझेर मात्रै पछि लाग्ने आह्वान् गरे। उनले नेताले भनेको सबै कुरो सही हुँदैन भन्दै अब नाला झोड़ाको काम गर्नु मात्र होइन तर सामाजिक सुधारका कार्यहरू गर्नु पर्ने बताए।
‘मलाई घरमा र बाटोतिर पनि काम माग्न आउँछन्। तर नेताहरूलाई सेतो कागजमा निवेदन गर्दैमा काम पाउने होइन। यसको लागि एउटा सिस्टम हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग्ने तरिका गलत छ। यही भनेर त म अघि आएको हुँ।’ आफूलाई शुरूदेखि नै तीनधारे, महानदी, घैयाबारीका जनताले साथ दिँदै आएको बताए।
उनले सङ्गोष्ठीमा राखिएको वार्तामा निस्किएको कुरालाई पाँच प्रतिशत पनि पालन गरिए सङ्गोष्ठी सफल भएको मान्ने बताए। ‘अब यो समितिले गाउँ -गाउँ र कमान बस्ती घुमेर अब्बल नानीहरू खोजी निकाल्नुपर्छ। बरू पढाई खर्च गर्नु परे गर्नेछौं, नानीहरूका लागि कोचिङ सेन्टरहरू पनि खोलिनुपर्छ,’ उनले भने।
जीटीए उपाध्यक्ष थापाले भने, ‘हामी चुनाव आउने बेला 3-4 महिना मात्रै सक्रिय हुन्छौं तर4वर्ष 8 महिना सक्रिय भएर धेरै कामहरू गरे चुनावको बेला घर घरमा गएर भोट मागिरहनु